Xafiiska IGAD ee Muqdisho oo beeniyey arrin culus oo lagu eedeeyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xafiiska IGAD ee Muqdisho ayaa beeniyay warar ay dhawaan bahiyeen qaar ka mid ah baraha Internet-ka ee Soomaalida oo sheegayey in xafiisku uu qorsheynayo in xarunta madaxtooyada qaranka ay geliyaan hub sharci darro ah.
War-saxaafadeed uu soo saaray wakiilka xafiiska IGAD ee Muqdisho, Jamaal Axmed Ibraahim ayaa lagu sheegay in wararka ay baahiyeen website-yada qaarkii uu yahay kuwa been abuur ah oo aan waxba ka jirin, islamarkaana xafiiska IGAD ee Muqdisho uu ku howlanyahay taageeridda iyo taakuleytan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
“Xafiisyada IGAD waxa uu ku howlanyahay taageeridda, taakuleeynta dowladda iyo hirgalinta Nabadgalyada Ummadda Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri War-saxaafadeedka.
War-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in Xafiiska IGAD ee Muqdisho uu u taagantahay la shaqeynta hay’adaha dowladda iyo dhiiri gelinta amniga, islamarkaana aysan dhaq jalaq u siin doonin wararka aan sal iyo raad toona lahayn ee ay baahinayaan Website-yada qaarkood.
Madaxweynaha & R/wasaaraha Soomaaliya oo booqanaya Puntland